Managing Employer Acc isiZulu
​UKUSINGATHA I-AKHAWUNTI YAKHO YABAQASHI
Isidaluli Sabaqashi Sanyanga Zonke (i-EMP201) kanye nohlelo lokukhokha kunika abaqashi intuba elula nesebenza kahle ekusingatheni i-akhawunti yeNhlawulo-Nganzuzo (i-PAYE), Intela Yokuthuthukiswa Kwamakhono (i-SDL), kanye Nesikhwama Somshwalense Wokungasebenzi (i-UIF). Ekuqaleni, abaqashi bekufanele bacele abasebenzi boPhiko Lwezokuqoqwa Kwentela eNingizimu Afrika (u-SARS) ukuba babaguqulele izinkokhelo futhi benze ukulungisa egameni labo. Ukuqaliswa kwe –EMP201 kanye nokuguqulwa kwezinkokhelo kuhloswe ngakho ukumandlisa abaqashi ukuze bakwazi ukuzisingathela futhi babe nempendulelo ngokuqonda kahle nokugcwaliseka kwama-akhawunti abo. Lokhu kudluliswa kwamandla empendulelo kanye nokugxila kuzohlinzeka abaqashi ngamandla okwenza lokhu:
Okuchibiyela izabelo zezidaluli nezezinkokhelo besebenzisa i-EMP201
Okubuka ama-akhawunti abao ukuze bahlonze futhi balandelele okwenza kuwo okungalungile/okushodayo besebenzisa esididyelwe Isitatimende Se-Akhawunti Yabaqashi (i-EMPSA) futhi babuze ngokusebenza kwawo.
Okulungisa izinkokhelo ezingafakwanga ezabelweni.
Ukusingatha i-akhawunti kubandakanya ukwenza isiqiniseko sokuthi izindaba zakho zezimali (kumbe intela) zihleleke kahle futhi zihambisana nesikhathi. Okungukuthi zonke izidingo zentela zivela kahle yini, nezinkokhelo zingene lapho beziqondiswe khona na, kanye nezinhlawulo zonke ze-akhawunti (kuhlanganisa izichibiyelo, inzalo nezinhlawulo) ukuba kubalwe kahle futhi kwaqoshwa ngokuyikho.
Inhloso ngukubeka umqashi esimweni sokuba akwazi ukusingatha impendulelo yakhe kwezezimali ngokuzimela, ngendlela esebenzayo neletha imiphumela ngokushesha.
U-SARS usenze izinhlinzeko zokuba umqashi asingathe i-akhawunti yakhe ngezindlela nangezinsiza eziningi:
INombolonkomba (i-PRN) ye-EMP201 Neyezinkokhelo ekuvumela ukuba uguqule isidaluli sakho futhi ufake imali yokukhokha kwezinye izabelo kalula.
I-EMPSA esihlelwe kabusha ehlanganise i-PAYE, i-SDL ne-UIF esitatimendeni esisodwa kuhambisana nezincazelo ezisekelayo kanye namazwana enza kube lula ukuhumusha.
Ukungena kalula kwi-akhawunti yakho nge-inthanethi. Kungekona kuphela ukubuka okwenza kuyo, kepha usungakwazi ukukulungisa ngaso leso sikhathi.
Uhlelo lokusingatha izindaba lapho ukwazi khona ukufaka amaphutha nokusilele kwe-akhawunti yakho ongakwazi wena ukukulungisa noma othanda ukubuza kabanzi ngakho, kubandakanya nezindlela zokuqapha ulandelele abakwa-SARS ekuxazululeni umbuzo wakho.
Ukusingatha i-akhawunti kufanele kube luhlelo olusheshayo nolulula inqobo nje uma usebenzise i-PRN kahle ngesikhathi ufaka futhi ukhokhela i-EMP201 yakho.
Last Updated: 24/06/2016 3:36 PM ​